Iisampulu zeekhamera ze-MP ze-48 ze-Oppo Reno ziyavela | I-Androidsis
Iisampulu zeekhamera ze-MP ze-48 ze-Oppo Reno, ifowuni yokuqala yochungechunge, ziyavela
Ngokukhawuleza u-Oppo uza kwenza uluhlu lwayo olutsha olusemthethweni, olubizwa 'Ixhama'. Iya kuqala nge-smartphone yayo.
Ngaphambili, besikhe sathetha ngesixhobo esiza kwaziwa. Ngeli xesha, Inkampani ityhile iisampulu ezininzi zekhamera evela kwi-Oppo Reno, kanye ngaphambi kokuba imiselwe kwinyanga ezayo.
Ngelixa singaqinisekanga malunga ne-Oppo Reno, usekela mongameli wenkampani, uBrian Shen, wabelane nge isampulu yekhamera ezazithi, ngokutsho kwakhe, zabanjwa yikhamera yesixhobo.
Isampulu yekhamera ye-Oppo Reno
Ngokukodwa, iisampulu zithathiwe kunye nekhamera ephambili ye-MP eyi-48 ngasemva kwaye iifoto azizange zihlelwe. Isigqeba sicacisile ukuba isixhobo sisephantsi kophuhliso, ke idatha eXIF Uya kubonisa ikhowudi ye I-R & D PBDM00. Iisampulu ziyamangalisa. Ukubonakaliswa kulunge kwaye ukucaca kulungile kakhulu, nkqu nakwiimeko eziphantsi zokukhanya, njengoko ubona.
Kwelinye icala, usekela-mongameli wayicacisa loo nto ikhamera isasebenza, Ke isixhobo sinokufumana iisampulu ezingcono xa sithengisa emarikeni. Oko kuvakala kunika umdla, ukusukela ngoko i-terminal inokubamba iifoto ngomgangatho ongcono.
I-Oppo Reno iya kubandakanya Ikhamera ephambili ye-megapixel engama-48 kunye ne-5 megapixel sensor yesibiniNgelixa kukho i-megapixel eyi-16 engaphambili ebhodini. Isiphelo bekusithiwa ngaphambili sine-chipset Snapdragon 855 ezisibhozo, kodwa uluhlu lwakutsha nje lweBluetooth SIG lubonisa ukuba ine-chipset Snapdragon 710. Izakufika ngo-Epreli, nangona ingaziwa ncam ukuba iza kufika nini. Yintoni eqinisekileyo kukuba iya kuba yi-smartphone efanele umdla, kuba Izimanga ezininzi ziya kuza nale modeli yokuqala yoluhlu lwe-Oppo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iisampulu zeekhamera ze-MP ze-48 ze-Oppo Reno, ifowuni yokuqala yochungechunge, ziyavela
Fumana uCarmen Sandiego kuGoogle Earth, umceli mngeni omtsha kubafana abavela kwiMountain View